Embassy of the Republic of the Union of Myanmar , London | နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ နျူကလီးယားလက်နက် စမ်းသပ်ဖောက်ခွဲမှု အလုံးစုံတားဆီးပိတ်ပင်ရေးစာချုပ်ဆိုင်ရာ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ သတင်း ထုတ်ပြန်ချက်
နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ နျူကလီးယားလက်နက် စမ်းသပ်ဖောက်ခွဲမှု အလုံးစုံတားဆီးပိတ်ပင်ရေးစာချုပ်ဆိုင်ရာ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ သတင်း ထုတ်ပြန်ချက်
A two-day workshop on the Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty is being co-organized by the Ministry of Foreign Affairs, the Comprehensive Nuclear- Test-Ban-Treaty Organization and the Australia Embassy in Yangon at the lake Garden Hotel in Nay Pyi Taw, at 9:00am today.
The Minister of State for Foreign Affairs U Kyaw Tin delivered an opening remark at the said workshop. Presented at the workshop were officials from the Ministry of Foreign Affairs, the Ministry of Defence, the Ministry of Transport and Communication, the Ministry of Education, the Union Attorney-General's office. Ambassador Coppel and officials form from the Australian Embassy and experts from the Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty Organization also participated in the said workshop.
Myanmar signed the CTBT in 1996 and has been studying to ratify the said treaty. Therefore, the said workshop is being observed in order to haveabetter understanding on the process of fulfilling the obligations and legal requirements of the treaty by officials concerned of Myanmar. The workshop will continue on 7th July 2016.
Date : 6th July 2016
နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ နျူကလီးယားလက်နက် စမ်းသပ်ဖောက်ခွဲမှုအလုံးစုံ တားဆီးပိတ်ပင်ရေးစာချုပ်ဆိုင်ရာအဖွဲ့ (Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty Organization) နှင့် ရန်ကုန်မြို့ရှိ သြစတြေးလျသံရုံးတို့ ပူးပေါင်း၍ နေပြည်တော် The Lake Garden Hotel တွင် နျူကလီးယားလက်နက် စမ်းသပ်ဖောက်ခွဲမှုအလုံးစုံ တားဆီးပိတ်ပင်ရေးစာချုပ် (Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty)ဆိုင်ရာ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲကို ၆-၇-၂၀၁၆ ရက်နေ့မှ ရ-၇-၂၀၁၆ ရက်နေ့အထိကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။
အဆိုပါ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားတွင် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယဝန်ကြီး ဦးကျော်တင်မှ အမှာစကား ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲသို့ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပို့ဆောင်ရေးနှင့် ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ရုံး တို့မှ ကိုယ်စားလှယ်များ ၊ သြစတြေးလျသံရုံး မှ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ သြစတြေးလျသံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Nicholas Coppel နှင့်သံအရာရှိများ၊ နျူကလီးယားလက်နက် စမ်းသပ်ဖောက်ခွဲမှု အလုံးစုံတားဆီးပိတ်ပင်ရေးစာချုပ်ဆိုင်ရာအဖွဲ့မှ ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များ တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံသည် နျူကလီးယားလက်နက် စမ်းသပ်ဖောက်ခွဲမှု အလုံးစုံတားဆီးပိတ်ပင်ရေးစာချုပ်သို့ ၁၉၉၆ ခုနှစ် တွင် လက်မှတ်ရေးထိုးထားပြီး အတည်ပြုပါဝင်နိုင်ရန်အတွက် လေ့လာဆောင်ရွက်လျက် ရှိပါသည်။
သို့ဖြစ်ပါ၍ သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနများမှ တာဝန်ရှိသူများ အနေဖြင့် စာချုပ်ပါ ကတိကဝတ်များ၊ လိုက်နာ ဆောင်ရွက်ရန်လုပ်ငန်းစဉ်များ ၊ ဥပဒေပြုရေးဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များ စသည်တို့ကို ပိုမိုနားလည်စေရန် အတွက် အဆိုပါ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲအား ကျင်းပခြင်းဖြစ်ပါသည်။